Par Taratra sur 06/03/2021
Mandeha ihany ny fiainam-bahoaka
Nilaza ny talen’ny Asa eo anivon’ny Banky iraisam-pirenena (BM) eto Madagasikara, ao Kaomoro sy ao Maorisy ary any Mozambika fa mahatratra 3 700 miliara Ar be izao ny fatiantoky ny Jirama, nanomboka ny taona 2009. Anton’izany ny fitanana ny politika vidin-jiro tsy voafaritra mazava nandritra ny folo taona.
Manahy ny hisian’ny krizy sosialy ny CFM manoloana ny hetsika samihafa mahazo vahana amin’izao fotoana izao. Mihamafy ny fifampihantsiana ary hita taratra eny amin’ny tambajotran-tserasera sy ny haino aman-jery izany. Ilaina ny fifanatonana sy ny fifampiresahana, ary misy ny dingana irosoan’ny CFM amin’izany.
Mahatratra 331 419 ny mpifidy vaovao nampidirina ao anatin’ny lisi-pifidianana, 196 035 ny mpifidy nesorina. Nitombo 1,30 % ny isan’ny mpifidy amin’izao, araka ny tatitry ny Ceni. 10 516 517 ny mpifidy ao amin’ny lisi-pifidianana nohavaozina, nofaranana vonjimaika ny 28 febroary, raha 10 380 133 izany ny taona 2020.
Nilaza ireo solombavambahoaka Tim fa hanao tatitra eny Soamandrakizay fa izay no hoe toerana nomen’ny fitondram-panjakana. Manoloana izany, nanazava ny vikera jeneralin’ny diosezin’Antananarivo eo anivon’ny fiangonana katolika fa tsy azo anaovana hetsika eny ny an-toerana izay manan-tompo.
Tamin’ny fotoana farany, niova hevitra ireo solombavambahoaka Tim fa eny amin’ny Magro, Tanjombato, indray nyu hanaovana ny tatitra. Hanao ahoana? Na izany aza, mandeha ihany ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Mba ho amin’ny fandrosoana amin’izay fa tsy ny fihemorana na ny fikorontanana, sanatria.